मधेसको राजनीतिक परिघटनामा फिल्म ‘एक’ (ट्रेलर)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मधेसको राजनीतिक परिघटनामा फिल्म ‘एक’ (ट्रेलर)
फिल्मी फण्डा । निर्देशक मनोज पण्डितद्धारा निर्देशन गरिएको फिल्म एकको ट्रेलर सनर्वजनिक भएको छ । निर्माण टिमले सामाजिक सञ्जालबाट फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
ग्रेटर नेपाल, बधशाला र दासदुङ्गाा लगायतका फिल्म निर्देशन गरेका पण्डितको एक आशा गरिएको फिल्म हो । देशको सिमाना मिचियो भनेर सधै चिन्तामा रहने यी पात्रले फिल्म ‘एक’मा मधेसलाई नेपालबाट अलग्याउने प्रयत्नका विरूद्ध एक देशभक्त ‘गुप्तचर’को संघर्षको कथा बुनेका छन्।
फिल्म डिजिटल प्लेटफर्ममा आगामी असोज २१ गते (घटस्थापना)का दिन प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ । ‘मधेसको विखण्डनकारी राजनीतिले अंगाल्न खोजेको अस्थिर मनोविज्ञान तथा काठमाडौंले खेलिरहेको असंवेदनशील राजनैतिक खेलका कारण नेपाल कतै विखण्डनतिर जान्छ कि भन्ने भाव फिल्मको देखाइएको छ ।
‘रअ’, सिआइए, आइएसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त गुप्तचर संस्थाहरूको बारेमा रोमाञ्चक किस्साहरू समेत फिल्ममा समावेश गरिएको निर्देशक पण्डितले बताए ।
कलाकार प्रमोद अग्रहरिलाई स्वतन्त्र मधेसको राजनैतिक एजेन्डा बोकेको पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरेको फिल्ममा विशाल पोखरेल नेपालको गुप्तचर निकाय सिएसआईको गुप्तचर एजेन्टका भूमिकामा देखिएका छन्।
यी दुई पात्रबीच मिसन केन्द्रित अन्तरसंघर्षको कथात्मक प्रस्तुती रहेको यो स्पाइ जनर एक्सन प्रधान फिल्ममा ज्योत्सना योगी महिला एजेन्टको भूमिकामा देखिएकी छन्। प्रमोद खड्काको एक्सन कोरियोग्राफी रहेको फिल्मलाई दीपक बज्राचार्यले खिचेका छन् ।
फिल्मको सम्पादन भरत रेग्मीले गरेका छन्। गोविन्द मधुर आचार्य, पुस्कर महतो र हरि लम्सालले फिल्म ‘एक’मा संगीत भरेका छन्। सिनेमा फ्याक्ट्रीको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्मका निर्माता आत्मा गुरागाईं र सोफिया थापा रहेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण थला परेको फिल्म उद्योगको विकल्प खोज्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत घटस्थापनाका दिनदेखि सिनेमा घर एप, डिसहोमको च्यानल ५५५, नेट टिभी, म्याक्स टिभी, र भाइ नेट तथा ओहो मूभिजबाट प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ । फिल्ममा प्रमोद खड्का, रामशरण पाठक, मदन ठाकुर, सुरेश शाह, सविर चुरौटे, हरून अली, रमेश महर्जन, रिसिका घिमिरे तथा बालकलाकार विश्वन्त पोखरेललगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्।
के दशैँमा चल्छ फिल्म ?
सर्ट मुभि कम्पिटिशनमा १०८ स्क्रिप्ट छनौट, सहभागीलाई एकदिने कार्यशाला सम्पन्न